Fiainana ara-tsendikaly : Ataon’ireo mpitarika fitadiavan-tseza fotsiny -
AccueilSosialyFiainana ara-tsendikaly : Ataon’ireo mpitarika fitadiavan-tseza fotsiny
Fiainana ara-tsendikaly : Ataon’ireo mpitarika fitadiavan-tseza fotsiny
14/04/2018 admintriatra Sosialy 0
Mitaraina ireo mpitarika sendikan’ny mpiasa eto Madagasikara fa tsy misy firaisankina intsony ny mpiasa malagasy, ka sarotra ny manao fitakiana sendikaly ankehitriny. Tranga tsy tokony hatao mahagaga intsiny satria noho izy ireo ihany no nahatonga ireo mpiasa tsy mahatoky ny sendika intsony. Nataon ‘ireo mpitarika fitaovana nitadiavana seza fotsiny mantsy hatramin’izay ireo mpiasa niditra teo amin’ireny sehatra sendikaly ireny hatramin’izay. Firifiry tokoa moa ireo mpitarika sendika no nitaona ireo mpiasa hitokona noho ny nambaran’izy ireo fa fitakiana zo, no nangina rehefa nahazo tombontsoa kely avy any ambadika any ? Anisan’ireny ny fanomezana toerana ambonimbony eo amin’ny sehatra poltika. Ohatra velona tamin’izany ny sendikan’ny mpampianatra eto Madagasikara (SEMPAMA) rehefa tsy nahazo seza ny mpitarika tamin’ny fotoana nitondran’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc, dia nampiaka-peo ka nitaona ireo mpampianatra tamin’ny ambaratonga voalohany nitokona tamin’izany fotoana izany. Rehefa namaivay ny fitakiana, dia nangina tampoka ireto mpitarika tao anatin’ny Sempana. Fantatra anefa avy eo fa noho ny fahazoana toerana ambonimbony tao amin’ny minisitera no anton’ny fahanginana. Diso fanantenana araka izany ireo mpampianatra notarihina nitokona. Nisy tamin’izy ireny aza no tapaka karama tsy fidiny satria nahatoky ny mpitarika sendika. Efa mankaleo ireo mpiasa ihany koa fampanantenana poakaty ataon’ireo mpitarika sendikan’ny mpiasam-panjakana. Mahatsiaro ho nataon’ireo mpitarika fitaovana fampihorohoroana ireo mpitondra nifandimby mantsy izy ireo hatramin’izay, ahafahana mahazo seza. Dia toa izany avokoa ny fomba ratsin’ireo mpitarika sendika maro eto amin’ny firenena, ka mamparefo ny fiainana sendikaly .
Hanao hetsika eo amin’ny kianjan’ny 13 Mai
Anisan’ny hetsika sendikaly nahomby indrindra ny niseho teny amin’ny kianjan’Alarobia tamin’ny 1Mai 2017. Noho io fahombiazana io anefa dia tonga teny avokoa ireo mpanao politika mpamatsy ireto mpitarika sendikaly, ary ny ampitson’io ihany ry Doudou sy ny namany dia niroso amin’ny filazana fanonganam-panjakana. Ity fanapahan-kevitra tsy voahevitra ity no nahatonga ireo mpiasa nangatsiatsiaka nandritra ny fankalazana ny 1mey tamin’ny taon-dasa. Takatr’ireo mpiasa malagasy mantsy ny tetika maloton’ireo mpitarika sendika, sy ireo mpanao politika mitady seza tsy mandala fifidianana ka dia naleon’izy ireny nanaja ny asany. Nanandrana nampivondrona ireo mpiasa indray ny firaisankinan’ny sendika tamin’ny fiandohan’ity taona ity noho ny paikady ho fanafoanana ireo mpiasam-panjakana matoatoa. Nisy ny fitetezam-paritra nataon’ireo mpitarika tamin’izany nanentanany ireo mpiasa hitokona. Tsy nahomby anefa io fanentanana io ka dia rava ho azy ilay fanentanana. Fanontanina napetrak’ireo mpiasa mantsy nandritra izany fitetezam-paritra izany ny hoe avy aiza ny vola nahafahana nanao ilay fitetezam-paritra? Fanontaniana izay tsy voavalin’ireto mpitarika ireto hatramin’ny androany. Mampametra-paontaniana araka izany ny hetsika ho tanterahin’ireto mpitarika sendikan’ny mpiasa ireto amin’ny fetin’ny asa amin’ity taona ity. Diabe miainga eny mahamasina no hotanterahina, ary miafara etsy anoloan’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo. Mazava ho azy fa nahazo alalana tamin’ny ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra ity hetsika hotanterahina ity. Azo antoka ihany koa fa tsy maintsy hisy kabary politika, satria hiakatra ny kianjan’ny 13 Mai ireo mpanao politika mpitarika sendika amin’io andro io.